राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा अपारदर्शी खेल, किन दिइयो भवन निर्माण रोक्ने निर्देशन ? – Janaubhar
राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा अपारदर्शी खेल, किन दिइयो भवन निर्माण रोक्ने निर्देशन ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक २८, २०७५ | 440 Views ||
घोराही । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहस्यमय ढंगले भवन निर्माणको काम रोक्न थालिएको छ । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रजिष्टार रामप्रसाद प्याकुरेलले असोज २८ गते निर्माण कम्पनी एम.के÷दिवा जे.भी.लाई पत्र लेखेर अर्को आदेश नभएसम्म निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएकाछन । प्रतिष्ठानको निर्देशनसँगै भवन निर्माणको काम रोकिएको छ ।
प्रतिष्ठानले निर्माण कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘प्रतिष्ठानमा बजेटको सुनिश्चिता भइ नसकेको हुँदा प्रतिष्ठानको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कारवाही अगाडी नबढाउन निर्णय अनुसार अनुरोध गर्दछु ।’
सो निर्देशनमा निर्माण कार्यको सिलसिलामा फर्मले कामदार बस्न प्रयोग गरिएका टहरा प्रतिष्ठानको लागि तत्कालै आवश्यकता भएको हुँदा १५ दिनभित्र टहराह? खाली गर्न आग्रह गरिएको छ । साविक राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल र उक्त निर्माण कम्पनी बीच बहुबर्षिय भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा २०७३ पुस ११ गते अर्थ मन्त्रालयले बहुबर्षिय योजना अन्तर्गत सो मल्टी प्रपोज भवनका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो । भवन निर्माणको शिलान्यास तत्कालिन अर्थमन्त्री महराले नै गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानले बजेट अभाव हुने कुरा उल्लेख गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बजेटको कुनै अभाव नभएको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख डा.विकास देवकोटाले प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि बजेटको कुनै अभाव नहुने बताए ।‘बहुबर्षिय योजना भएकाले कार्य प्रगतिका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ, हामीलाई यसको बारेमा औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ उनले भने– ‘प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव हुने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ अहिले पनि प्रतिष्ठानले आवश्यक बजेट मागेमा मन्त्रालयले तत्काल अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि पहल गर्ने देवकोटाले जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगीता भण्डारी पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का गर्ने मनस्थितिमा पुगेको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । अहिलेको ठेकेदार राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालले नियुक्त गरेकाले उसँग काम गर्न भण्डारी अनिच्छुक देखिएको स्रोतको दावी छ । प्रतिष्ठानले निर्माण कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा बजेट अभावको कारण देखाउँदै तत्कालका लागि निर्माण रोक्न आग्रह गरिएको छ । तर, निर्माण कम्पनीका कामदारह? बस्ने टहराह? समेत हटाउन निर्देशन दिइएकाले घटनालाई थप रहस्य बनेको छ ।
प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय उपकुलपति भण्डारीले मनोमानी ढंगले काम गरिरहेकीछन् ।
उनले कर्मचारी नियमावली नबनाएरै आफू खुशी डाक्टर तथा कर्मचारी भर्ना प्रकृया शु? गरेकीछन् । पुराना काम गरिरहेका डाक्टर तथा कर्मचारीह? प्रति पूर्वाग्रही ढंगले व्यवहार गर्न थालेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीह? बताउँछन् । प्रतिष्ठानको ऐनमा महत्वपूर्ण निर्णयह? सिनेट बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने भएपनि भण्डारीले आफू खुशी काम गर्दै आएकीछन् ।
Prevजिल्ला पार्टी एकताको काम चाँडै टुंगिन्छ
Nextअस्तव्यस्त अवस्थामा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान